lg peni 6 kudzokorora
Kuru Nhau & Ongororo LG Stylo 6 Ongororo
Ikozvino kupinda mu LG's bhajeti Stylo mutsetse inoenderera nekambani streak yekusaremekedza asi inoshandisika yekupinda-chikamu mafoni. Seimwe yemaoko chete ekuisa chinyoreso kunze kweiyo Samsung Galaxy Note dzakateedzana, iyo Stylo 6 inounza imwe niche kune iyo bhajeti nzvimbo mune inoratidzika inoratidzika package.
Low-powered specs chengetedza mashandiro acho zvakanaka uye kamera zvakare yakaenzana, asi iyo hombe kuratidzwa, yakasimba bhatiri hupenyu, uye yakazara yakazara-yakatenderedzwa maficha seti inobatsira kuti zvionekwe. Kunyangwe iri kure nechimurenga chishandiso kunyangwe mukati mekirasi yacho, zvakanaka zvakakwana kuti utarise kune avo vanotsvaga yakakosha smartphone pamutengo wakaderera.
Tenga iyo LG Stylo 6 paKusimudzira Nhare
Iyo Stylo 6 yakakura zvinoshamisa kune mudziyo webhajeti, iine ratidziro yakatambanuka kusvika kune yakakura 6.8 inches. Foni yegirazi muviri uye esimbi furemu inokweretesa yakanaka heft, uye inonzwa yakasimba uye inovakwa zvakanaka. Yakasanganiswa neye nondescript asi yakakwenenzverwa dhizaini dhizaini, iyo Stylo 6 chaizvo inonzwa kunge mureza muruoko.
Pakati pemativi, iyo foni ine yega simba kiyi kurudyi uye vhoriyamu rocker, Google Mubatsiri kiyi, uye SIM tireyi kurudyi, iyo yekupedzisira iyo zvakare inosanganisira microSD slot yekuwedzera memory. Iwe zvakare uchawana imwe chete mutauri, USB-C chiteshi, headphone jack, uye yakavakirwa-mukati stylus kuyambuka pasi.
Musana wakatsetseka wakasiyiwa usina chinhu kusara kwekatatu-lens kamera module uye capacitive zvigunwe zvigunwe kuverenga, izvo zvinomhanya zvine mutsindo uye zvine mutsindo, kunyange kusanzwisiswa kusingawanzo kuitika. Zvese-mune-zvese, foni ine zvakawanda zvekugadzira maficha ayo akajairwa nemutengo uyu, iri imwe nzira yekureva kuti ine zvakawanda zvezvinhu zvatakatora sezvisina basa vasati vabuda muchitaira.
Iyo Stylo 6's IPS inoratidzira inowedzera uye inokwana zvakakwana pa Full HD, 1080p resolution uye 395 pixels-per-inch. Iwo mavara anotaridzika kutonhora zvishoma nekukasira, asi musiyano uye saturation nhanho hadzina kushata, zvichiita kuti ruzivo rwakazara rufadze pasi pemamiriro mazhinji.
Nehurombo, iyo iratidziro iri pakati nepakati mune dzimwe nzira. Iko kupenya kunowana kusinganyanyi kukwirira zvakakwana kuti kuvepo kwezuva, uye kutarisa angles hakusi kwepamusoro-notch futi. Zvakadaro, chiratidziro chinotaridzika chakaringana, uye chiyero chakanaka pakati payo saizi hombe uye yakatetepa 20.5: 9 factor ratio inoita kuti igare kubata uye kuona zvakazara.
Nzvimbo yekumira yefoni ndiyo mazita ayo, uye yakaitwa mushe mushe. Iyo stylus pachayo yakatetepa ine microfiber tip, uye yakasununguka kubata uye kushandisa kwekusvetuka swiping pamwe nekuketa kana kunyora. Kurambwa kwemichindwe kunochengeta ruzivo rwacho kazhinji rwusingaitwe netsaona, izvo zvinoita kuti chinyoreso chinyanye kunakidza kushandisa.
Pakazara, iyo software yekubatanidza yakaitwawo zvakanaka. Iyo memo pad inowanikwa chero nguva yeanokurumidza manotsi, ayo anochengetera kune yakasarudzika QuickMemo + app, uye, sekutanga kushandurwa, kutora chinyoreso chinosimudzira inoyerera bhatani remenu, iro rinobata zvakapusa asi zvinobatsira maturusi senge skrini yemupepeti kana GIF-inogadzira. Iwe unogona zvakare kugadzirisa iyi menyu kuvhura chero chirongwa pamunwe wako (kana stylus-tip).
Iyo Stylo 6 ine kamera nhatu, inosanganisira huru 13MP shooter, yakafara-angle lens, uye yakadzika sensor. Iyo yekumashure yekumisikidza kamera inosuruvarisa mediocre, kunyange isiri yakaipa nenzira inotyisa pamutengo wepakati. Foni inokwanisa kutora huwandu hunogamuchirwa hwehuwandu pasi pekuvhenekera kwakanaka, nemavara anofadza uye nhanho dzakanaka dzekusiyanisa uye kuzadza.
Kana mwenje ikava shoma pane yakanaka, zvakadaro, ruzivo rwunotambura sezvo pikicha yese inotanga kupfava. Kubata kweanosimba renji kwakangonakawo futi, uye zvinoratidzwa zvinowanzoburitswa kunze nyore. Zvirokwazvo kudonha kunoshamisa kubva pamatanho emureza, kunyange vapfuri vasina kujairika vangangoona zvichiri kushandira.
Iko kune zvakare yakakura-kona lens, uye kunyangwe hazvo zvakanaka kuva nazvo, mhando yacho inoodza mwoyo. Tsanangudzo inowanzo kurasikirwa, uye kunyangwe ichokwadi kuti haina kuzara seakawanda akafanana setups, kukanganisa kunoipisisa kupfuura kungave. LG inowanzoita mushe nemalenzi akareba, asi iyi haisi imwe yekuedza kwayo kuri nani.
Kana ari ma selfie, kamera-yakatarisana nekamera zvakare inzwa ye13MP, uye yakanaka chaizvo, sezvinei. Mifananidzo ine kupinza kwakakwana, uye toni dzeganda dzinotorwa nenzira kwayo, futi.
LG Stylo 6 Muenzaniso mifananidzo
LG & apos; s UX ganda ot pamusoro pe Android 10 Iyo Stylo 6 ngarava ine Android 10, iyo isingafanire kunge inofadza kushamisika sezvazviri, uye software iri yakajairwa LG fizi, ine anofara akakomberedza mifananidzo uye ine hushamwari hunhu hwese. LG's UX ganda harinyatso kuwedzera mashandiro makuru, asi rinoita kuti basa riitwe pasina yakawanda bloat (kunyange ini ndakawana akati wandei eanotakura maapplication akaiswa-akaiswa).
LG zvechokwadi haina rekodhi rekodhi kusvika pakuvandudzwa kwesoftware, asi iyo Stylo 5 padyo-inoshamisa yekuvandudza ku Android 10 inopa iyo Stylo 6 imwe tariro yeramangwana.
Nechomukati, MediaTek Helio P35 chipset uye 3GB ye RAM inochengeta foni ichimhanya. Izvi chaizvo hazvisi akakodzera maspec, uye mashandiro anogona kunge ari musanganiswa bhegi. Pane nguva apo foni inomhanya zvakanaka pasina kana nyaya, asi pane nguva apo pombi yega yega kana swipe inonzwa millisecond imwe chete ichinonoka.
Ini handina kuwana mashandiro acho kunge akasarudzika, asi nyaya iri pamusoro pekumhanya kwese uye mashandiro ezuva nezuva, ayo asinganzwe seanofashukira sezvingaite mudziyo wepamusoro-kumagumo. Kana iwe uine zvaunotarisira mureza, iwe uchaona zvichinonoka zvisingaite, asi kune avo vasingade mheni-nekukurumidza zvese, mashandiro anogamuchirwa.
GFXBench Mota Dzingirira pa-screen
Geekbench 5 imwechete-musimboti
Geekbench 5 yakawanda-musimboti
zita Yakakwirira iri nani
LG Stylo 6 2.9
Samsung Galaxy A20e 8.5
Kana iyo T-Rex HD chikamu cheGFXBench chiri kuda, saka iyo Manhattan bvunzo iri kunetseka chaizvo. Iyo & apos; s yeGPU-centric bvunzo iyo inoteedzera yakanyanyisa yakajeka nharaunda yemitambo inoitirwa kusundira iyo GPU kune iyo max. iyo inofanidza mamiriro emitambo-akasimba emitambo pachiratidziri. Mhedzisiro yakawanikwa inoyerwa mumafuremu sekondi, uye mamwe mafuremu ari nani
Ruzha & Midhiya
Тhe Stylo 6 yekuteerera yekutamba haisi chaiyo studio mhando, asi zvinoshamisa kuti punchy uye yakaenzana, iine huwandu hwakadzikama hwemabhasi uye kujekesa pakati pepakati nepakakwirira. Iwo ekupedzisira magumo anowanzoita kuti awedzere kugwinha, asi zvakazara iwo odhiyo mhando inokwanisa.
Zvekufona, ini handina kunzwa zvichemo zvekubuda odhiyo. Inouya odhiyo yakanga isiri yakajeka, asi zvakadaro zvakachengeteka mukati memiganhu isina matambudziko.
Inofambiswa ne4,000mAh bhatiri sero, iyo Stylo 6 inopfuura kugadzirirwa kukutakura iwe kuburikidza nemazuva maviri azere, kana kuti ingangoita yakareba kuti ireruke kushandiswa. Kunyangwe iratidziro hombe, foni inokwanisa kupa zvakachengeteka gumi nemaviri kana anopfuura maawa echiratidziri panguva, nepo kutenderera kweNetflix kana kushambadzira midhiya yenhau kunotora kanosvika 9% paawa. Hupenyu hwebhatiri zvirokwazvo ndechimwe chezvakakurumbira zveiyo Stylo 6 package.
Padivi rekuchaja, foni inogona kukwidza kumusoro mukati maminetsi makumi mapfumbamwe kuburikidza nekuchaja wired, uye kuchaja isina waya nenjodzi haina kutsigirwa.
LG Stylo 6 Dzimwe nzira
Mamwe mafoni akakura mubhokoto rimwe chete aripo, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira. Iyo Nokia 5.3 yakanaka yepasi-midranger yakatenderedza mutengo mumwe chete, iine kamera iri nani uye processor, asi iine chiratidzo icho chiri chidiki uye chisina kupinza. Samsung's A20e yakatodhura kupfuura iyo Stylo 6, asi iyo yekuratidzira, yekuchengetedza, uye bhatiri zvese hazvishamise.
Iyo Moto G Simba inogona kunge iri tyisidziro huru, sezvo ichipa chipset ine simba rakanyanya uye hwakatowanda hupenyu hwebhatiri. Asi zvinodhura uye zvidiki zvakare, uye hapana chinyoreso, hongu. Zvichienderana nezvamunoisa pamberi, zvinogona kunge zviri nani kutenga. Iyo Stylo 6 iri nyore kwazvo kukurudzira kana ichitariswa neyekutakura zvakaderedzwa, asi pamutengo wakazara zvinenge zvisiri izvo zvakanyanya bhuru remari yako.
Luxe aesthetic uye yemhando yepamusoro kuvaka
Hwakanaka hupenyu hwebhatiri
Roomy, inopinza kuratidza
Zvishoma pane kutsvedza kuita
7.0 Tinoyera sei?
9.0 2 Ongororo
renyeredzi cherechedzo 10 plus dema chishanu
akanakisa rpg maapps e iphone
T-Mobile uye OnePlus yakarova AT & T uye Apple kutora yazvino 4G LTE uye 5G yekukurumidza korona muUS
Iyo yepamutemo Galaxy S10 skrini yekutsiva uye yekugadzirisa mitengo iri kugara muUS, yakakwira kwazvo
Maitiro ekugonesa uye kudzima Google Zvino paTap (Android 6.0 Marshmallow inodiwa)
Inogona here iOS 15 kugadzirisa iyo iPhone & apos; chinetso chakakomba kwazvo?
Vashandisi vePixel 4 vanotambura nekudzima skrini mushure meazvino Android 11 beta kugadzirisa